Ciraaq oo u goodiday Turkiga - BBC Somali
Ciraaq oo u goodiday Turkiga
7 Disembar 2015
Dawladda Ciraaq ayaa ku goodiday in ay Qaramada Midoobay u dacwoon doonto haddii aysan Turkigu ciidammadooda kala bixin agagaarka magaalada Mosul ee ku taala koonfurta Ciraaq mudo 48 saac gudahood ah.
Baqdad waxay sheegtay in aan lagala tashanin ciidammada halkaasi la geeyay taasina ay xadgudub ku tahay madaxbanaanideeda.
Mosul waxaa maamuli jiray malayshiyada isku magacawda Dawladda Islaamka tan iyo sanadkii hore.
Rai’sal wasaaraha Turkiga Ahmet Davutoglu ayaa difaacay go’aanka ay ciidammadoodu ku joogaan gudaha Ciraaq wuxuuna sheegay in ay yihiin kuwo isbadbadala oo dagan xero horay loo sameeyay.
Turkigu waxay geeyeen magaalada Bashiqa boqolaal ka mid ah ciidammadooda si ay u tababaraan ciidammada Kurdiyiinta ah ee Ciraaq ee la dagaalamaya Dawladda Islaamka.
Rai’sal wasaare Xaydar Al-Cabadi wuxuu sheegay in ay adeegsandoonan wadooyinka u furan oo dhan, kuwaas oo ay ka mid tahay in ay ku dacweeyaan golaha ammaanka ee Qramada Midoobay haddii aysan Turkigu ciidamadooda la bixin muddo 48 gudahood ah.